U gaar ah Ragga Guurdoonka ah:10-ka Magaalo ee Ugu Dumarka Qurxan Somalia | Xaqiiqonews
U gaar ah Ragga Guurdoonka ah:10-ka Magaalo ee Ugu Dumarka Qurxan Somalia
Marka laga hadlaayo hablaha ugu qurxan soomaaliya, baladweyne waa muhiim in la sheego sida uu ku doodaayo Gabyaaga caanka ah Abwaan Hawdraawi.
Runtii Hadraawi ma ahan nin ka badbadiyey amaanta gabdhaha baladweyne, waxaa arintaasi ku raacay sugaan yahanno badan oo isku raacay in baladweyne ay tahay magaalada ugu gabdhaha qurxan soomaalia.
Abwaan ayaa yiri” buurahaan jecleystiyo baarkii muuqa dheeraa bartankeediyo baladweyney ku nooshahay”
Baladweyne waxaa dagan beelaha gaaljecel, xawaadle, jajeele baadi cadde, ujeejeen ,jidle,faqay cumar ,faqay maxamuuud, reer-aw xasan, shiiqaal iyo gabdhaha Makanno jareer weyne oo ku fiican xagga sariirta.
si kooban baladweyne waa hoyga gabdhaha ugu qurxan soomaaliya
Hadii la soo hadal qaado in laga hadlo magaalooyinka ugu gabdha qurxan soomaaliya, in Burcaa laga hadlaa waa arin qof walbo uu saadalinaayo runtii waxaa tusaale kaga filan sida abwaanadii soomaaliyeed ay tixyo kaga tirayeen gabdhaha reer burco ku darsoo Hodan Cabdulle oo uu jeceyl dhimasho ah u qaaday Cilmi boodhari waxa ay aheyd reer Burco .
Si kooban Burco oo ay daganyihiin beelaha Habar yuunis, haber jeclo, arabsiiyo iyo beelaha aadka u qurux badan ee somaalida ay heeb soocdo sida Yaxar iyo boon waxaa la dhihi karaa burco waa xarunta Jaceylka Soomaaliya
3_Baladxaawo -Gedo Somalia
Magaalada Balad-xaawo ma jirto qof tagay oo aan gabar ka guursan sababtuna waa mid xiiso badan !
Balad xaawo oo ay ku noolyihiin gabdho ugu qurxan soomaaliya ayaa marka la is barbardhigo ragga iyo dumarka ku nool waxaa seddex jibaar badan dumarka.
Arintaasi oo ka dhigan in 1-kii ninba ay ku soo aadeyso 4 dumar ah Runtii quxurda gabdhaha reer balad-xaawo waxaa sheegay abwaanadii hore oo gabayo qiimo badan ka tiriyey.
Magaalada oo ay dagan yihiin beelaha Mareexaan iyo Murule waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ku tilmaaman quruxda hablaha.
Si kooban ninkii awood u leh in uu tago Balad xaawo waa nin nasiib badan !!
Guud ahaan Bakool waa gobolada ugu gabdhaa qurxan soomaaliya gaar ahaan xarunta gobolka oo ah magaalada Xudur.
Xudur oo inta ugu badan ay dagantahay beesha Hadamo oo ka tirsan beelaha digil iyo marifle, ayaa waxaa ku nool gabdhaha ugu dhaadheer soomaaliya.
Ma tahay nin jecel in uu ku xusho gabadha uu guursanaayo dhererkeeda,hadii jawaabtaadu haa tahay Xudur waa goobta ugu wanaagsan ee ay ku rumoowi karto riyadaadii aheyd in aad hesho gabar dheer oo cad.
Si kooban Hoyga gabdhaha Ugu dheer soomaaliya Waa xudur.
5_ Mogadishu- Benadir Capital City of Somalia
Muqdisho xarunta dalka soomaaliya waa magaalada Martigelisa gabdhaha ugu shidan xagga Isteelka runtii Muqdisho waxaa ku nool gabdhaha ugu qurxan soomaaliya waliba ku darsoo abwaanada ka tiriyey quruxda hablaha muqdisho ma ahan mid la soo koobi karo.
Muqdisho waxaa degan inta ugu badan beelaha Benaadiriga, Abgaal,Shiiqaal, habargidir, mursade Xawaadle, duduble,Moobaleen, Gaaljecel, Baadicadde, Galladi, Bagadi, Maxamed gargaarte,ujeejeen, Dir ,Raxanweyn, Shiidle jareer oo ah gabdhaha ugu fiican Sariirta marka laga hadlo gabdhaha madow ee afrikaanta iyo Dhamaan Beelaha kale ee soomaaliyeed waxaa la dhihi karaa ma jirto beel soomaaliyeed illaa waxaa muqdisho u dagan ugu yaraan hal qoys.
Ilka case ayaa mar uu tirinaayey hees raab ah waxaa la xasuustaa in uu yiri” Hablaha Ugu shidan muqdisho u daa”.
Ma tahay guur doon daneeynaya labiska iyo isteelka gabadha hadii jawaabtaadu haa tahay si marun la,aan muqdisho waa magaalada kuu balan qaadeyso in aad hesho gabar quruxdeeda ku darsatay is Qurxin.
Si kooban muqdisho waa Hoyga gabdhaha Fashion-ka somaaliya.
Fadlan la soco qeybta tan xigta oo aan ku soo qaadan doono 5-ta magaalo kale ee harsan.